सुन्दर यौन जीवन चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी उपाय
----------------- | जेठ २६, २०७६ आइतबार | 0
काठमाडौं । अधिकांश मानिस यौन चिकित्सक अथाव थृेरापिस्टलाई दुई प्रश्न सोध्ने गर्छन् । पहिलो – यौन जीवनलाई कसरी सुन्दर बनाउन सकिन्छ ? अर्को – कसरी लामो समयसम्म यौन सम्पर्क कायम राख्न अथवा उत्तेजित रहन सकिन्छ ? यस्तोमा आफ्नो यौन जीवन रोमाञ्चक होस् भन्ने चाहने हो भने निम्नलिखित कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
पोर्न हेर्न बन्द गर्नुहोस्
लागूपदार्थ सेवन कम गर्नुहोस्
धूमपान र मद्यपानले मानिसको स्वास्थ्यमा निकै असर गर्छ भन्ने कुरामा त कुनै शंका छैन । यसले फोक्सो, कलेजोदेखि मुटुलाई समेत असर गरी विभिन्न किसिमका रोग निम्त्याउन सक्छ । लामो समयसम्म मद्यपान गर्ने मानिसमा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोनको उत्पादन कम हुन्छ जसले यौन जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । धूमपानले पनि यौनांगहरुमा असर पुर्याउँछ । त्यस्तै, धूमपानले रक्तसञ्चारमा कमी ल्याई उत्तेजना पनि घटाउँछ ।
वेटलिफ्टिङले शरीरको आकार सुन्दर तथा आकर्षक बनाउनुका साथै शरीरमा भएको बोसोको मात्रा घटाउँछ र टेस्टोस्टेरोन हार्मोनको उत्पादन बढाउँछ । त्यस्तै, वेटलिफ्टिङले स्टामिना पनि बढाउँछ जसले यौन सम्पर्कको समय बढाउन र बेडमा राम्रो पर्फर्म गर्न सहयोग गर्दछ ।
दैनिक ७–८ घण्टा आराम गर्नुहोस्
आराम गर्नाले र आनन्दले निदाउनाले शरीरमा इनर्जीको लेभल त बढाउँछ नै । यसले यौन जीवनमा पनि सहयोग पुर्याउँछ । स्वस्थ यौन जीवनको लागि स्वस्थ जीवन र आरामको पनि निकै आवश्यकता हुन्छ । यसको लागि दैनिक ७–८ घण्टा अनिवार्य सुत्नुपर्छ । अचेल मानिसहरु दैनिक घण्टौं ग्याजेट्समा झुम्मिने भएकाले आरामको समय निकै घट्दै गएको छ जसको प्रत्यक्ष असर मानिसको स्वास्थ्य र यौन जीवनमा परिरहेको छ । त्यसैले आफ्नो बानी सुधारेर पर्याप्त मात्रामा आराम गर्नुपर्छ । अन्यथा मानिसमा मानसिक विकार, थकान, तनाव आदि बढ्न सक्छ र पर्याप्त यौन आनन्द लिन सकिँदैन ।